ARETINA MITARAZOKA :: Iray amin’ny fiarovana amin’ny VIH/Sida ny fanaovana fitiliana • AoRaha
ARETINA MITARAZOKA Iray amin’ny fiarovana amin’ny VIH/Sida ny fanaovana fitiliana
Fisorohana. Nanka­lazaina ny sabotsy lasa teo ny andro iraisam-pirenena ho an’ny ady amin’ny VIH/ Sida. Ho an’ny Komitim-pirenena miady amin’ny tsimok’aretina ity dia ny fanaovana fitiliana ihany no isan’ny fiarovana amin’izany.
“Ilaina ny manao fitiliana mialoha ahafahana mitsabo tena ary mba hahafantarana ireo aretina mpanararaotra amin’ny vatan’ny olona iray raha sanatria misy izany tsimok’aretina izany ny olona iray”, hoy Rasoanarivo Jasminah, tompon’andraikitra teknika eo anivon’ny Komi­tim-pirenena miady amin’ny Sida, ny sabotsy lasa teo,
nandritra ny fitiliana mai­maim-poana notanterahina teny Ambohijatovo.
Ho an’ny taona 2018, efa nanomboka ny 27 novambra lasa teo ny fanaovana fitiliana maimaim-poana eny anivon’ ny tobim-pahasalamana CSB II teto amin’ny Faritra Anala­manga. Voalaza fa saika ahitana olona mitondra ity tsimok’aretina ity avokoa isaky ny misy fitiliana maimaim-poana atao. Olona manodidina ny 31 000 no vinavinaina hahavita fitiliana mandritra ny volana desambra.
Araka ny fantatra, mano­didina ny 0,3 isan-jato ny tahan’ireo olona mitondra ity tsimok’aretina ity eto amintsika. Voalaza fa mety hahaka­sika ny olon-drehetra izany saingy ambony kokoa ny taha ho an’ireo lehilahy miaraka amin’ny lehilahy satria manodidina ny 14% izany raha 8,2% kosa ho an’ireo vondron’olona mitsindrona zava-mahadomelina.
Ny dimy isan-jaton’ireo vehivavy mpampanofa tena kosa no fantatra fa mitondra izany. Tsiahivina fa efa misy ireo fanafody hahafahan’ny olona miaina miaraka amin’ ny VIH/Sida mandritra ny fotoana maro. Maimaim-poana ny fahazoana izany fitsaboana izany eny amin’ny tobim-pahasalamana miankina amin’ny fanjakana rehetra. “Mampihena ny lanjan’ny tsimok’aretina ao anatin’ny vatan’ny olona ity fanafody ity. Mety tsy hamindra amin’ ny hafa intsony koa izay mihinana izany raha manaraka tsara ny torolalana omen’ny mpitsabo”, hoy hatrany Rasoanarivo Jasminah.
FAMPIOFANANA :: Hohamafisina ny fampiroboroboana ny fampianarana teknika any Antsiranana